Varotra: napetraka ny tetikasa “Tsinjo” | NewsMada
Fehezam-pitsipika ho an’ny fikoloam-pasalamana-CUA: Sazy 50 000 Ar ny fandrorana sy ny famaniana eny an- ...septembre 18, 2020
Peur des Sénatoriales: Le HVM et Tim demandent la dissolution de la Ceni ...septembre 18, 2020
Fehezam-pitsipika ho an’ny fikoloam-pahasalamana – CUA: sazy 50 000 Ar ny fandrorana sy ny famaniana eny an-dalana…
Peur des Sénatoriales : le HVM et le TIM demandent la dissolution de la Ceni
Adiny roa vao tafavoaka ireo razana: efa-dahy maty nianjera tao anaty… lavapiringa
Organisation des Sénatoriales: la Ceni dispose de 1,862 milliard d’ariary
Voaroban’ny jiolahy ny vola 30 tapitrisa Ar: voatifitra teo amin’ny tendany sy ny sorony ilay mpitam-bolana orinasa
Can 20222-Préparation des Barea: besoin d’un coup de pouce financier
Tao anatin’ny herinandro: olona 2 252 tratra tsy nanao arovava, 117 naiditra ”violon”
Revendication des îles Eparses: le Sénat malagasy reste silencieux
Tankina ilay raim-pianakaviana: maty sempotry ny enton-tsaribao ny vadiny sy ny zanany dimy
Relâchement des gestes barrières: les forces de l’ordre renforcent les contrôles
Varotra: napetraka ny tetikasa “Tsinjo”
Par Taratra sur 15/02/2020
Namelabelatra voalohany ny fandaharanasany amin’ity taona ity ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra sy ny asa tanana, omaly, notarihin’ny minisitra, Rakotomalala Lantosoa. Indostria, varotra, asa tanana, fihariana telo lehibe iankinan’ny toekarem-pirenena daholo ireo.
Nasongadin’ny Ramatoa minisitra amin’ity tetikasan’ny minisitera ity ny fitsinjovana ny mpanjifa. Raha tsiahivina, efa nasiana resaka ny fiarovana ny mpanjifa amin’ireo entam-barotra avy any ivelany, izay 80 % mahery miditra eto. Koa hamafisina hatrany izay fitsinjovana ny mpanjifa izay, napetraka ny tetikasa “Tsinjo” amin’ity taona ity. Eo amin’ny sehatry ny varotra, voakasik’izany, indrindra ireo zavatra ilain’ny mponina andavanandro (PPN). Koa amin’izany tetikasa “Tsinjo” izany, tsy maintsy hanaovana tatitra ny tahiry misy, jerena raha mifanaraka amin’ny vidiny niaingana.
Amin’izany tetikasa izany koa ny hijerena ny lalam-barotra sy ny fitsinjarana azy, hisorohana ny tsy fanarahan-dalàna, toy ny mpanjifa mividy entana mivantana any amin’ny mpamongady ; ny mpaninjara tsy manana karatra ; vidin’entana tsy misy faktiora…. “Koa tsy maintsy averina ny fanarahan-dalàna iaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny tetibola”, hoy ny minisitra. Ao anatin’izany fitsinjovana ny mpanjifa izany ny ahazoan’ny fanjakana manafatra PPN. “Tsy atao hifaninanana amin‘ny tsy miankina izany fa hizahana izay tsy ataon’izy ireo, nefa ilain’ny vahoaka, koa tsy afaka hitazam-potsiny ny fanjakana. Na izany aza, ny sehatra tsy miankina no hitsinjara ny vokatra fa tsy ny fanjakana”, hoy ihany ny minisitra.
Na manafatra aza ny fanjakana, mandoa haban-tseranana, toy ny rehetra, ny mpamongady izay mahazo ny tsena eo amin’ny fitsinjarana azy kosa mahafeno ny fepetra rehetra, ohatra, fananana toerana fitahirizam-bokatra. Maro amin’ireo mpamongady ireo no tsy mahafeno ny fepetra amin’ny asany ka tsy mahagaga raha be ny mpanararaotra, misondrotra ho azy fotsiny amin’izao ny vidin’entana, ankoatra ireo efa lany andro mampidi-doza ho an’ny mpanjifa.
Fehezam-pitsipika ho an’ny fikoloam-pasalamana-CUA: Sazy 50 000 Ar ny fandrorana sy ny famaniana eny an-dalana 18/09/2020
Peur des Sénatoriales: Le HVM et Tim demandent la dissolution de la Ceni 18/09/2020
Tsy fanjarian-tsakafo: manentana ny fikambanana “Hina” 18/09/2020
Fanadihadian’ny OIT: anisan’ny ratsy karama indrindra ny eto Madagasikara 18/09/2020
Taom-pambolena 2020-2021 : misy ny fanantenana amin’ny vary any Alaotra 18/09/2020